नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : लैजानु पर्ने हरुलाई नलैजाने तर नलैजानु पर्ने हरुलाई खोजि खोजि लैजाने निस्ठुरी काल !
लैजानु पर्ने हरुलाई नलैजाने तर नलैजानु पर्ने हरुलाई खोजि खोजि लैजाने निस्ठुरी काल !
लैजानु पर्ने हरुलाई नलैजाने तर नलैजानु पर्ने हरुलाई खोजि खोजि लैजाने निस्ठुरी कालले फेरि नेपालको अर्को सच्चा सपुत बरिस्ठ साहित्यकार जगदीश घिमिरेलाइ हामि बिचबाट टपक्क टिपेर लगेछ। यस्तै रहेछ विधिको बिडम्बना ! स्वर्गीय घिमिरे प्रति भाबपुर्ण बिदाइ र शोक शन्तप्त परिवार जनमा हार्दिक समबेदना।
- नेपाल मदर डट कम परिवार